Ungayifometha kanjani iMac noma i-hard drive yangaphandle ku-macOS | Ngivela kwa-mac
Ungayifometha kanjani i-hard drive ku-Mac
UJoseph Alfocea | | Apple, I-Mac OS X, Izifundiswa
Ezindabeni ezinjengalezi ngihlala ngikhumbula okokuqala ngithinta iMac: Bekufanele ngithathe umakhalekhukhwini wami we-Symbian, ngixhume kwi-Messenger futhi ngibuze ukuthi ungayithola kanjani i-MSN kwikhompyutha yami entsha. Inkinga ngokushintsha uhlelo lokusebenza ukuthi bashintshe konke bakunikeza thina, ngakho-ke uma sintsha isishintshi wenze ukushintsha kwakho kusuka ku-Windows kuya ku-OS X, mhlawumbe asazi ungayifometha kanjani i-hard drive yangaphandle ku-Mac.
Kuyavunywa, inqubo ilula, kepha ayifani naku-Windows, lapho kufanele uchofoze khona kwesokudla kudrayivu bese ukhetha "Ifomethi". Ukufeza okufanayo ku-Mac OS X kuzofanele sikwenze usebenzisa uhlelo lokusebenza Disk Umbuso etholakala kufolda yezinsiza, yona engaphakathi kwefolda yezicelo. Ngokulandelayo sizokukhombisa ukuthi kanjani fometha i-hard drive yangaphandle ku-Mac (okungafani neze nokufometha iPendrive).
1 Ungayifometha kanjani i-Hard Drive yangaphandle ku-Mac
2 Izinhlobo zefomethi
2.1 IMac OS X Plus
2.2 I-MS-DOS (FAT)
3 Ngingakwazi ukufometha i-hard drive ku-NTFS ku-Mac?
4 Ngingasula i-disk kwi-Mac ngaphandle kokuyifometha?
5 Ungayifometha kanjani iMac
6 Izinzuzo zokufometha iMac
7 Ungayifometha kanjani iMac igxathu negxathu
Ungayifometha kanjani i-Hard Drive yangaphandle ku-Mac
Sivula iDisk Utility, njengoba sishilo, isendleleni yezicelo / izinsiza. Singayivula futhi kusuka ku-Launchpad bese singena kufolda yabanye noma sivule i-Spotlight bese siqala ukubhala igama layo (indlela yokugcina iyintandokazi yami).
Ku-Disk Utility, sikhetha i-hard drive esifuna ukuyifometha, sinakekele ukuthi singakhethi enye i-hard drive okungenzeka ukuthi sayixhuma kwi-Mac ngaleso sikhathi.
Okulandelayo, sichofoza ku- «Susa».
Sikhetha uhlobo lwefomethi esiyifunayo.
Ekugcineni, sichofoza ku- «Susa» futhi.
Inqubo ilula, akunjalo? Kepha, ngokuya ngezidingo zethu, sizofometha idiski ngandlela thile.
Amathiphu wokukhulisa isikhala sakho sediski ku-Mac
Yilokho Ifomethi ye-Apple, ukukubeka ngendlela esheshayo nelula. Uma sifometha i-hard drive esizoyisebenzisa kumakhompyutha we-Mac, kungenzeka ukuthi lena yifomethi enhle kakhulu esingayisebenzisa, ngoba konke kuyashesha futhi kusebenza kangcono. Kepha inkinga ukuthi namuhla kunamakhompyutha amaningi futhi asikwazi ukwazi ukuthi sizoyisebenzisa nini kolunye uhlelo lokusebenza, ngakho-ke kufanele kucace ukuthi uma siyifomatha kwiMac OS X Plus ngeke sikwazi ukufunda noma ubhale kuyo kwenye ikhompyutha. Le fomethi akuyona eyokwabelana, asihambe.
Singasho ukuthi i-FAT yi ifomethi yendawo yonke. Ku-Windows sizoyibona njenge-FAT32 futhi uma siyifometha ngale ndlela singafunda futhi sibhale imininingwane kunoma yiluphi uhlelo olusebenzayo, olufaka iMac, iWindows, iLinux kanye namadivayisi weselula noma ama-consoles.
Inkinga ngale fomethi ukuthi isekela kuphela amafayela aze afike ku-4GB, ngakho-ke asikwazanga ukuhambisa i-movie elingana ne-DVD (4,7GB) kwi-USB noma ku-FAT hard drive. Sihlala sinesixazululo sokusihlukanisa, kepha lokhu kungaba yinkinga engakufanele.
Ifomethi ethokozisayo yekhompyutha yi- I-ExFAT. Kuyinto ifundeka kusuka kwi-Mac, Windows ne-Linux, kepha ngeke bakwazi ukuyifunda noma ukuyibhala kwezinye izinhlobo zamadivayisi, njengamaselula, amakhonsoli, amathelevishini, njll. Uma kufanele uhambise idatha phakathi kwamakhompyutha, le fomethi ifanelekile. Uma iyunithi lakho kufanele lisetshenziswe ezinhlotsheni eziningi zamadivayisi, kungcono ukusebenzisa i-FAT.
Ngingakwazi ukufometha i-hard drive ku-NTFS ku-Mac?
Yebo, kodwa ngama-nuances. Amakhompyutha we-Apple angakwenza konke. Eqinisweni, singakwazi ukufaka iWindows ngeBootcamp futhi sisebenzise zonke izinhlelo zayo. Kepha njengoba esikufunayo ukufometha idiski ku-NTFS ku-OS X, lokhu bekungeke kube inketho. I-NTFS yifomethi ye-Windows yendabuko, ngakho-ke ngeke sikwazi ukusebenza kuyo nge-Mac ngaphandle kwebhokisi.
Ukufometha i-hard drive ku-NTFS usebenzisa iMac kuzofanele siyifake isoftware yomuntu wesithathu okukhokhwa, njengoba kungenzeka uqagele. Izinhlelo ezimbili ezinhle kakhulu yiParagon NTFS ye-Mac (Landa) neTuxera NTFS ye-Mac (Landa). Uma nje olunye lwalezi zinhlelo selulandiwe futhi lwafakwa, sizokwazi ukufunda nokubhala kunoma iyiphi idiski enefomethi yeNFTS, futhi siyifomethise kusuka kwi-Mac uqobo.
Ngingasula i-disk kwi-Mac ngaphandle kokuyifometha?
Kuyavunywa, lokhu kungaba yinkinga uma singazi ukuthi singakwenza kanjani. Kuzinhlelo zokusebenza ezenzelwe i-Unix awukwazi ukumane ususe idatha kudiski yangaphandle, cha. Ngokuphepha, lapho sisusa idatha kudrayivu yangaphandle ku-Mac naku-Linux, le datha izoya kufayela le- ifolda efihliwe enegama ".Trash". Okokuqala, uma singayiboni, sizokwazi kuphela ukuthi siphelelwa isikhala sediski. Siyixazulula kanjani le nkinga engathandeki? Yebo, kulula kakhulu futhi kungcono ukufunda ukuthi ungasusa kanjani idatha kumadrayivu angaphandle ngaphambi kokuya kudoti.
Ukuze sikwazi ukususa idatha kudiski yangaphandle noma i-USB kwi-Mac kuzofanele sikwenze ngezinyathelo ezimbili: kweyokuqala sizocindezela inkinobho yokulawula futhi, ngaphandle kokuyikhipha, sizodonsa ifayela noma amafayela esifuna ukuwahambisa. remove kudeskithophu yekhompyutha yethu. Ngokucindezela ku-Control esikwenzayo ukuthi "bahambise"Ngakho-ke, ngenkathi siyikopishela kudeskithophu yethu, izoyisusa ngokuphelele kudrayivu yethu yangaphandle Okwesibili, ngokunengqondo, ukususa ifayela ngokulihambisa kudoti.
Uma usuyisusile idatha, awuboni lutho ku-Isitholi futhi idiski iyaqhubeka nokuhlala esikhaleni, kuzofanele wenze into efanayo naleyo esiyichaze esinyathelweni esedlule, kodwa okokuqala kuzofanele sithathe okwedlule isinyathelo: vula ukuphela (esingangena kuyo ngemizila efanayo neDisk Utility) bese sibhala umyalo olandelayo:
okuzenzakalelayo bhala com.apple.finder AppleShowAllFiles TRUE
Lapho kuzofanele sibeke khona "IQINISO" ukubona amafayela afihliwe noma "AMANGA" ukuze amafayela afihliwe asafihliwe. Njengoba amafayela afihliwe abonwa kahle manje sesingabheka ifolda ethi «.Trash» (iphuzu eliphambili lisho ukuthi lifihliwe), hudula idatha kudeskithophu bese kudoti.
Kusukela manje kuqhubeke ngiyaqiniseka ukuthi awusenayo inkinga lapho ufometha i-hard drive ku-Mac.
Ungayifometha kanjani iMac
IMac ingumshini oseduze ophelele, kepha "iseduze" kuphela. Ngaphandle kokusebenza kwayo okuhle, amandla nokusebenziseka kalula kwanoma yimaphi amamodeli ayo ngaphezulu kwe-PC, iqiniso ukuthi "Okungenamsoco" nakho kunqwabelana kumakhompyutha ethu we-Mac kusuka kuzinhlelo zokusebenza esivele sizikhiphile, izifaki zohlelo lokusebenza esingazazi ukuthi zisekhona, izibuyekezo, amakhukhi, izinqolobane, nokuningi. Ngakho-ke, ngezikhathi ezithile, kuyasiza fometha iMac bese uyishiya ihlanzekile efekthri. Ngaphezu kwalokho, uma ufisa, ungalahla futhi isipele sakho se-Time Machine futhi, yize ngingasincomi ngoba lokhu kuzolahla nengxenye yaleyo "doti", noma lawo mafolda owake wenza ikhophi yawo kwi-hard drive yangaphandle .
Izinzuzo zokufometha iMac
Lapho usufomathile iMac yakho, uzobona ngokushesha izinzuzo ezimbili:
Isitoreji se-Mac yakho se-HDD noma se-SSD manje sinokuningi isikhala esikhululekile, noma ngabe usubuyisele izinhlelo zakho zokusebenza ngisho nokulahla isipele sangaphambilini.
I-mac yakho manje isebenza ngokushelela kakhulu kunakuqala, iyashesha futhi isebenza kahle.
Ungayifometha kanjani iMac igxathu negxathu
Uma ikhompyutha yakho ye-apula ingasasebenzi ngendlela efanele, lapho-ke isikhathi sesifikile sokufometha iMac yakho, into elula njengokulandela izinyathelo ezilandelayo zencwadi:
Yenza ikhophi yokusekelayo ye-Mac yakho nge-Time Machine noma ukopishele kudrayivu yangaphandle konke okudingayo ukukudlulisa ngokuhamba kwesikhathi kwi-Mac yakho efomathiwe: amadokhumenti, izithombe, amavidiyo ... Uma ungadingi noma yikuphi kwalokhu ngoba yonke into isingathwe ifu, ungakwazi ukweqa lesi sinyathelo.
Vula iMac App Store bese ulanda inguqulo yakamuva yesifaki se-MacOS futhi.
Okwamanje, iya ku- le webhu bese ulanda ithuluzi le-Disk Maker
Uma ama-macOS neDiskMaker elandiwe, qiniseka ukuthi unayo ikhadi le-SD noma i-pendrive okungenani eyi-8GB umthamo bese uyixhuma kwi-Mac yakho.
Qalisa uhlelo lweDiskMaker bese ulandela imiyalo yalo. Kumele ukhethe uhlelo olusebenzayo ne-pendrive oyixhumile bese ufaka iphasiwedi yakho yomlawuli. Kuzobe sekuqala inqubo ezokwakha i- idiski ebhuthini ku kusho ipendrive. Yiba nesineke, inqubo ithatha isikhashana ngakho ungenzi lutho nhlobo kuze kube kuvela umyalezo esikrinini okhombisa ukuthi konke sekumi ngomumo.
Uma inqubo isiqedile, vula "Izintandokazi Zesistimu" ku "Startup Disk". Khetha i-boot disk entsha (i-pendrive oyenzile) bese uchofoza ukuqala kabusha. Uma utshelwa, qinisekisa isenzo bese ulinda iMac yakho iqale nge-installer ye-MacOS esikrinini.
Manje khetha i- "Disk Utility", khetha ukwahlukanisa kwamanje ku-Mac yakho bese ushaya inkinobho Susa uqinisekisa ukuyigcina kufomethi ye- "Mac OS Plus (Journaled)". Lokhu kuzosula lonke uhlelo lokusebenza lwamanje, kushiye iMac yakho ihlanzekile ukufakwa okusha.
Yeka i- "Disk Utility" bese uqhubeka nenqubo yokufaka i-MacOS njengenjwayelo.
Lapho utshelwa, faka i-ID yakho ye-Apple, neMac yakho “entsha” izovumelanisa ngokuzenzakalela amabhukhimakhi, umlando, amabhukumaka, okuqukethwe yi-Apple Music, izithombe namavidiyo avela kuhlelo lokusebenza lwezithombe, amadokhumenti namafayela agcinwe ku-ICloud Drive, nokuningi.
QAPHELA: Uma uyifomathile ukuyithengisa, ungafaki i-ID yakho ye-Apple, ngalesi sikhathi ungayivala ukuze umnikazi wayo omusha akwazi ukuyilungiselela.
Futhi Voilà! Usuyifomathile iMac yakho futhi manje manje usungayijabulela inguqulo yakamuva yohlelo olusebenzayo ngokufakwa okumsulwa ngokuphelele. Uzobona ngokushesha ukuthi iMac yakho isebenza ngokushesha futhi bushelelezi, nokuthi inesikhala sokulanda samahhala.
Manje kufanele uvule iMac App Store, iya esigabeni "Okuthengiwe", bese uqala ukulanda nokufaka zonke izinhlelo zokusebenza ozisebenzisa njalo. Enye inzuzo enkulu ukuthi lezi zinhlelo zokusebenza zizofakwa kunguqulo yazo yakamuva, hhayi ukuvuselelwa lapho kubuyekezwa.
Ekugcineni, uma uzibuza ukuthi kufanele ufomathe kangaki iMac, ngizokutshela nje ukuthi ngiyayenza kanye ngonyaka, kufana nokukhishwa kwenguqulo entsha, ngakho-ke iqembu lami lihlale lihamba kahle.
Indlela ephelele ye-athikili: Ngivela kwa-mac » Apple » Izifundiswa » Ungayifometha kanjani i-hard drive ku-Mac
Sawubona, ngiyabonga ngosizo lwakho. Ngikwenzile okuncomile futhi uma nginyusa kancane umthamo wesikhala samahhala kwisitoreji, kepha manje usayizi wezithombe, umsindo namamuvi awasaboniswa kulelo windi, njengoba kwakunjalo ngaphambili. Ngiyacela ukuthi ngikwenze kanjani ukugcinwa kukhombisa ukuthi isitoreji sicela.
Yebo, kubonakala sengathi kwakwanele ukukhipha udoti ukuze ubone amanani abonakalayo evidiyo, alalelwayo, izithombe nezipele. Ukungabaza kwami ​​ukuthi isilinganiso sahluka kakhulu maqondana nalokho esasinakho ngaphambi kokwenza inqubo oyincomile (isigaba sabanye sikhulu kakhulu uma siqhathaniswa nezinye ngendlela, kepha ngicabanga ukuthi kuvamile). Noma kunjalo, uma ngabe uneziphakamiso zokuthuthukisa ukusebenza kwe- «MacBook Pro (Retina, 15-inch, Mid 2014)» ngingakuthokozela ngoba ngibona sengathi inciphile futhi kwesinye isikhathi kuthatha isikhashana ukucisha futhi kwesinye isikhathi ilenga isikhashana kepha iyenza.
Sawubona. Ngine-hard drive ye-multimedia, futhi ngifuna ukuyifometha nge-ntfs. nge-mac captain noma i-xs system
kufanele uyixhume kwi-Mac futhi kusuka kunketho ye-Disk Utility ulandele izinyathelo ku-athikili kuleyo disk yokufuna i-OS X Plus (ngerejista)
I-Pro yami ivuselelwe kepha seyephuze kakhulu ingabe isuka ku-4 kuye ku-8 Ram noma kuyanconywa ukuyinikeza? Ngiyabonga
AbakwaSony 4K bafunda amadiski ku-exfat
Sawubona okuhle, ngingayifometha kanjani iMac ene-2 ​​yangaphakathi ye-hdd, eyodwa eqinile futhi eyodwa "ejwayelekile"?
ayinakho ukuhambisana okuncane, ngasendleleni, futhi iluchungechunge lwe-samsung ssd 840 pro.
"Ayinakho ukuhambisana okuncane, ngasendleleni, futhi uchungechunge lwe-samsung ssd 840 pro."
kahle yilokho elikushoyo ku "ngale mac"
Ngishintsha i-hard drive yami yoqobo ngoba ibimbi. Ngithathe lesi simo lapho ngizama ukufaka ukaputeni futhi ngokungazelelwe umshini ukhiyiwe. Ku-Apple ngaya enkingeni, kepha bathi bad hard drive. Anginayo i-boot disk.
Ngishintsha i-hard drive entsha eyi-1 TB SSHD, ngafaka i-16 GB RAM entsha ngaphambi kwe-4 GB. Ngabuyela ku-Apple futhi futhi abakwazanga ukufaka ukaputeni. Ngihlolile komunye umshini ne-RAM uma kuyasebenza. Uchwepheshe uvivinye i-hard drive futhi nayo yasebenza. IMicroprocessor nayo isebenze.
Lapha idatha evela kwikhompyutha yami, kungenzeka abanye babe nenkinga efanayo
IMacbook pro ngokwesilinganiso sika-2010, yayine-Snow Leopard efakiwe. I-hard drive enephutha kwakuyi-500GB ne-4GB Ram. Ngishintshela ku-1TB hard drive naku-16GB RAM.
imikhonzo, ngiyabonga ngesandla sangaphambili
UGabriel Martinez kusho
mngani ngine-macbook pro ka-anti wami ene-pasword efi ye-bios futhi engenayo i-akhawunti yomsebenzisi yohlelo lokusebenza ngifuna ukuyifometha njengoba ngikwazi ukukwenza
Phendula u-gabriel martinez
Sawubona Mngane wami ngivela kwa-Mac!
Ngine-Hard Drive entsha yangaphandle, futhi ngidinga ukuyifometha ukuze ngiyisebenzise kwi-iMac yami. Le yiMy Passport model WD. Kwenzeka ukuthi ngenze izinyathelo zokwenza ifomethi, kepha lapho ngifika ewindini lokugcina bese ngichofoza ku-Dele,
umyalezo ungitshela ukuthi: "Ukususwa kwevolumu kwehlulekile ngenxa yephutha: Idiski alikwazanga ukwehliswa"
Ezinye izikhathi: »IDiski ibingavulwa» futhi imidwebo yokusula iyanyamalala, kanti iDisk ihlala ingafakwanga.
Ngicela ungitshele ukuthi yini inkinga ??? Ngiyabonga futhi maqondana. UCarlos.
Sawubona. Ngafaka idrayivu entsha yeCrucial SSD maphakathi no-2010 MBP wami owabuyekezwa ngeSierra. Ngizama ukulungisa kabusha idiski futhi ngeke ingivumele ngisule. Imephu yokwahlukanisa ibhalwe njengengahambelani.
Uma ngizama ukubuyisa kusuka kumshini wesikhathi iqhubeka ifuna idiski lokuya kuyo. Ngicabanga ukuthi kungenxa yokuthi ayifomathiwe.
Ngingakufeza kanjani ukuguqulwa kwefomethi nokuhambisana?
sawubona .. ngicabanga ukuthenga i-WD multimedia hard drive. kepha umthengisi ungitshela ukuthi isekela kuphela ifomethi ye-MAC, MAC OS PLUS.
umbuzo wami ukuthi uma kukhona ongakwenza ... ukufometha noma okuthile ukwenza kusebenze ngamawindi?
ICanon digital, u-Aetna ukhipha i-Apple Watch, 1.000 billion nge-TV nokunye okuningi. Okuhamba phambili kweviki ngivela kwa-Mac
Ukuvela kwe-macOS kuvidiyo engaphansi kwemizuzu engu-2